Nnyocha oghere oghere Juno na-egosi anyị mma nke okporo osisi Jupiter | Network Meteorology
Foto: Nchọpụta nke oghere Juno na-egosi anyị mma nke okporo osisi Jupiter
Ogwe osisi Jupita abụọ ejiri nyocha »Juno».
Na nke mbụ ya na akụkọ ihe mere eme nke ihe a kpọrọ mmadụ, anyị nwere ike isi n’ụlọ ime ụlọ anyị na-ahụ okporo osisi Jupita, mbara ala nke na-enwu gbaa nke dị n’ebe tere anya, na ọdịghị ala karịa 588 nde kilomita. Na ekele niile maka NASA, yana ọzọkwa maka nyocha mbara igwe ya "Juno".
Na onyonyo o werela ị ga - ahụ oke ihe otiti nke ajọ ikuku oval nwere omume na ngwakọ nke ahụbeghị na mbara ụwa ọzọ na mbara igwe. N'ebe ugwu achọpụtala oke ebili mmiri, kilomita 1.400 n'obosara.
Foto - Craig Sparks
Agbanyeghi na enweghi oke oke mmiri ozuzo, ha ahula a igwe ojii nke dị ihe dịka kilomita 7.000 na dayameta nke dị elu karịa ndị ọzọ na North Pole. N'oge ugbu a, amabeghị etu ụdịrị ihe ịtụnanya dị etu a ga - esi kpụọ; Agbanyeghị, mgbe ị na-amụ data banyere ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku dị n’ime ikuku, a chọpụtala nke ahụ nnukwu amonia nke si na mpaghara miri emi puta na-enye aka na nguzobe ha.
Ohere nyocha »Juno» abụwo onye mbụ nwere ike ịlele ịsa ahụ nke electrons na-adaba na mbara igwe, nke na-eme ka ikuku ugwu nke ugwu ikuku na-ekpo ọkụ. Afọ iri gara aga NASA nyocha Pioneer 11 gafere kilomita 43.000 karịa igwe ojii, mana "Juno" abịala ugboro iri nso, yabụ o siiri ndị ọkà mmụta sayensị ike ịchọpụta ike ndọta magnet. Ihe si na ya pụta 7.766 gauss, okpukpu abụọ nke gbakọọ ruo ugbu a. Iji nweta echiche nke ihe na-eme na mbara ala nke gas, anyị ga-amarịrị na ike nke ndọta magnet bụ 100 gauss, nke dị ka ihe na-adọrọ adọrọ nke ndọta mmanya gbatịrị ogo 11 n'ihe banyere axis. nke uwa.
Oké ifufe na mbara ala Jupita. Foto - NASA
South osisi nke Jupiter, were ya »Juno». Foto - NASA
Juno, nke otu ogige basketball, bụ oghere dị na jiri naanị ike anyanwụ jidere site na nnukwu ogwe. Igwefoto na ihe ndị ọzọ metụtara sayensị ka ejiri titanium kpuchie ya ka e wee chebe ha nke ọma site na radieshon nke Jupiter na-ewepụta. Ma ya "igbu onwe ya" na-eme atụmatụ: ọ ga-abụ na February 20, 2018, mgbe ọ banyere n'èzí nke ikuku iji chọpụta ma enwere isi okwute dika ekwerela na ogologo oge. Ọ bụrụ otu ahụ, ebe Jupita bụrụkwa mbara ụwa izizi, nwere ike ịkọwara ndị sayensị ụdịrị ihe dị na mbara igwe mbụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ foto ndị ọzọ, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Foto: Nchọpụta nke oghere Juno na-egosi anyị mma nke okporo osisi Jupiter
Vanuatu, mpaghara ụwa kacha emetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe
Kedu ọdachi ndị na-emere onwe ha kachasị emetụta ụwa?